Posted by သက်ဝေ at 3:25 PM
စိုးထက် - Soe Htet ! May 22, 2008 at 9:06 AM
very lovely and peaceful !
Layma May 22, 2008 at 1:25 PM
ချစ်စဖွယ်ပုံလေးတွေ နဲ့ပြုံးပျော်သွားပါတယ်.. မသက်ရေ..။
ရွှန်းမီ May 25, 2008 at 11:49 AM
ကျေးဇူးပါ မသက်ဝေ ရေ။ ပြုံးသွားပါတယ်။ =)
nu-san May 26, 2008 at 11:18 AM
သက်ဝေရေ.. ဓာတ်ပုံလေးတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးနော်။ ကြောင်ပုံလေးကိုချစ်တယ်။
မွန်းကြပ်တာတော့ မပြောပါနဲ့တော့ စိတ်ရှုတ်ပြီး ဒေါသတွေပဲ များများလာတယ်။ စိတ်ငြိမ်အောင် တရားခွေဖွင့်ထားလည်း သတင်းကြည့်ပြီးရင် အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ ဒေါသထွက်ရတယ် မကောင်းပါဘူး။ အခုတလော စိတ်ရှုတ် အလုပ်ရှုတ်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေဆီကို မလည်နိုင်ဘူး။ ဘလော့ခ်လည်း ရေးချင်စိတ်မရှိလို့ ပစ်ထားတာ ကြာလှပေါ့။ သက်ဝေသတင်းလာမေးတာ ကျေးဇူး :)
တန်ခူး May 26, 2008 at 11:42 AM
ကျေှးဇူးပါသက်ဝေရေ… ဓာတ်ပုံလေးတွေကနေ breakလေးရသွားတယ်
မောင်မျိုး June 23, 2008 at 4:44 PM
ခဏလေးပြုံးသွားတယ် ခဏလေးပဲ နော် ကြာကြာမပြုံးနိုင်ဘူး ;)